Frantsa - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny République Française)
République française ((fr))
Repoblika frantsay ((mg))
Teny filamatra : Liberté, Égalité, Fraternité
Teny ofisialy frantsay
Tanàna ngeza indrindra Paris
- Rano (%) faha 41
- Tontaliny (Janoary)
- hakitroka faha 21
65 073 482 mpo.
Anaran'ny mponina Frantsay
IDH (2006) ▲ 0,955 (ambony be) faha 11
Sandam-bola Euro sy Franc CFP, (EUR)
Faritr'ora UTC +1 (CET) ;
hora fahavaratra : UTC+2 (CEST)
Hiram-pirenena 'La Marseillaise'
1.1 Fiavin'ilay anarana hoe Frantsa
2.2 Isan'ny mponina
Lahatsoratra antsipirihany : Tantaran'i Frantsa.
Fiavin'ilay anarana hoe FrantsaHanova
Ny anarana Frantsa dia avy amin'ny teny frantsay hoe France avy amin'ny teny latina Francia. Tamin'ny voalohany, tenenina hoe Francia ny faritany avaratr'i Eoropa misy mponina Jermanika mitondra anarana hoe Franka. Fizaran,-tany latina tamin'ny taonjato faha 3 i Francia, avy amin'ny fiteny franka franko(n) izy io; io anarana io dia anaran'ny Flandira Belzianina ankehitriny.
Ny tany frantsay any Eoropa dia voafaritry ny Ranomasimbe Atlantika any andrefana, voafaritra ny La Manche (ranomasina manasaraka azy amin'ny Englandy) sy ny Ranomasina Avaratra any avaratra, voafaritr'i Belzika, Luxembourg, Alemaina, Soisa sy i Italia any atsinanana, ary ny Ranomasina Mediteranea, Andora, Monako sy Espaina any atsimo.
Ny tany frantsay amin'ny kontinanta dimy dia voafaritr'i Brezily sy Sorinama any amin'ny Guyane Française, voafaritr'i Kanada any Saint-Pierre et Miquelon ary voafaritry ny Fanjakan'i Holandy any amin'ny Nosy Masina Martin, voafaritry ny ranomasina koa ny tany frantsay : ny Ranomasimbe Pasifika any Polinezia, ny Ranomasimbe Indianina any Mayotte sy any La Réunion, ny Ranomasina Karaiba any Guadeloupe, any Martinique, any amin'ny Nosy Masina Martin ary ny Nosy Masina Barthelemy.
Any andrefan'i Eoropa no misy ny tanin'i Frantsa metropolitany. Manana (zana)tany koa ny laftantsa any ivelan' Eoropa : Any Amerika Avaratra, any Antila, any Amerika Atsimo, any Afrika (Ranomasimbe Indianina) any avaratra sy any atsimon'ny Ranomasimbe Pasifika sy any Antarktika. 2 970 km ny halavan'ny sisintaniny amin'ny firenena valo any Eoropa: Espaina (650 km), Beljika (620 km), Soisa (572 km), Italia (515 km), Alemaina (450 km), Luxembourg (73 km), Andora (57 km) ary Monako (4,5 km). Any Amerika Atsimo, mizara sisintany amin'i Brezily (720 km) sy Sorinama (520 km) i Guyane Française. Misy sisintany manana halavana 10,2 km (tsy tena hita maso) eo amin'ny nosy Masina Martin manasaraka ny tanin'ny Repoblika Frantsay sy ny tanin'ny Fanjakanan'i Holandy. Amin'ny farany, ny Tany Adelia (ao amin'ny TAAF), lazain'i Frantsa ho azy, dia tany be ao Antartktika lazain'i Aostralia ho azy.
I Fantsa dia manam-pivelarana 543 965 km2 (655 688 km2 miaraka amin'ny zanatany), mivelatra 1 000 kilometratra i Frantsa amin'ny teza avaratra-atsimo sy amin'ny teza atsinanana-andrefana. Izy no firenena ngeza indrindra ao aorian'i Rosia sy Okraina ; ary izy no firenena ngeza indrindra ao amin'ny Vondrona Eoropeanina. Ny halavan'ny morontsirany dia misy 3 427 km (raha tsy isaina ny morontsirak'i Korsa mahatratra 1 000 km).
ny hakitroky ny departemanta frantsay
Miisa 65 073 482 ny olona monina any Frantsa tamin'ny 1 Janoary 2009. 62 448 977 no miaina any amin'ny metrôpôly. Misy fanisam-bahoaka atao isan-taona tamin'ny taona 1801 hatramin'izao, fa tamin'ny fanombohan'ny taona 2004, atao lalandava ny fanisam-bahoaka.
Ny isa-mponin'i lafrantsa
Anisan'ny ambony indrindra any Eoropa ny fitombo ny isam-ponina any Frantsa, ambony noho ny salanisa eoropeanina ny isan'ny teraka any Frantsa (830 900 ny teraka ary 531 200 ny maty), ary miakatra elanelan'isan'ny mpifindra monina miditra amin'ny mpifindra monina mivoaka (olona 100 000), noho izany dia niakatra 0,61 isan-jato ny isam-poninan'i Frantsa.
Lahatsoratra antsipirihany : fiteny frantsay.
Ny fiteny frantsay izay fehezin'ny Akademia frantsay no be mpiteny indrindra any Frantsa, ary "fitenin'ny Repoblika" hatry ny lalàna arazm-panorenan'ny 25 Jiona 1992. I Frantsa no firenena miteny frantsay faharoa lehibe indrindra aorian'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, fa voalohany amin'ny lafiny isan'ny mpiteny. Firenena ao amin'ny Fikambanan'ny firenena miteny frantsay i Frantsa.
Ankoatry ny teny frantsay ofisialy, fiteny 75 no notenenina tany Frantsay, miaraka amin'ny fiteny hafa isam-paritra, ny fiteny avy amin'ireo mponina vahiny ary ny fiteny any amin'ny DOM-TOM, araky ny tatitry ny mpahay fiteny Bernard Cerquiglini.
Tanonkala ny elysée
Tanonkala ny praiministra sy ny governemanta
↑ Isa-mponina eo amin'ny CIA world factbook
↑ 543 965 any France metirôpôlitany. manana 42=32 000 km2 koa ny firenena frantsay any Terre Adelie tamin'ny 1959.
↑ Isa hoan'ny repoblika frantsay INSEE, misy 62 448 977 any Frantsa metirôpôlitany.
↑ isam-ponina/km² any frantsa metirôpôlitany : 114,86
↑ Franc Frantsay taloha ny taona 2002.
↑ Franc CFP Mbola miasa any amin'ny zanatany frantsay any Ôseania :
↑ ((fr)) http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=IP1220&reg_id=0#inter1
↑ LOI constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : "Des Communautés européennes et de l'Union européenne" (1)
↑ Repoblika Demokratikan'i Kongo
↑ Les langues de la France
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Frantsa&oldid=993912"
Dernière modification le 11 Jolay 2020, à 09:30
Voaova farany tamin'ny 11 Jolay 2020 amin'ny 09:30 ity pejy ity.